Ganacsatada Muqdisho oo $1 milyan oo doolar gaarsiinaysa gurmadka Baladweyne - Awdinle Online
Ganacsatada Muqdisho oo $1 milyan oo doolar gaarsiinaysa gurmadka Baladweyne
October, 31, 2019 (AO) – Shir ay soo qaban qaabisay Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliyeed oo ay gogasha dhigtay shirkadda Hormuud ayna ka soo qeyb galeyn ganacsato iyo culimaaudiinka, ujeeddadiisuna aheyd u gurmashada dadku uu saameeyey fatahaadaha ayaa Arbacadii lagu qabtay magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga, Maxamuud Cabdi Cali (Gabeyre) oo shir guddoominayey ayaa marka hore u tacsiyeeyey dadkii ku dhintay fatahaadaha ,wuxuuna caddeeyay in ganacsataduna ay diyaar u yahiin inay qeyb weyn ka qaataan gurmadka fatahaadaha si dadkeena loo badbadiyo.
Sidoo kale inta uu shirka socday Ganacsatada madasha fadhisay ayaa ku yaboohday lacag gaareesaa $640,000 lana lagaarsiiyo ilaa hal malyan oo doollar wejiga hore.
Ugu dambeyntii,waxaa la isla gartay in la magacaabo guddi u xilsaaran arimaha gurmadka guddiga ayaana ka kooban 15 xubnood oo ka kala yimid ganacsatad iyo culimada.
Previous articleBaarlamaanka Carabta oo Dalbaday in Cunaqabateynta Hubka laga qaado Soomaaliya
Next articleMaxaa ka jira in Farmaajo iyo Sheekh Shariif khadka taleefanka ku wada hadleen